FAHA-50 TAONAN’NY VATIKANA SY NY FANJAKANA MALAGASY | Madatopinfo
FAHA-50 TAONAN’NY VATIKANA SY NY FANJAKANA MALAGASY
Sorona Masina fankalazana : 29 Janoary 2017 eo Mahamasina
Lamesa eny Mahamasina no ivon’ny Fankalazana ny fifandraisana ara-diplaomatika eo amin’ny Fiketrahana masina sy ny Fanjakana Malagasy, ny alahady 29 Janoary 2017 izao. Higadona eny amin’ny Seranam-piaramanidina Ivato ny Solotenan’ny Papa Ray Masina, ny Kardinaly Pietro Parolin, ny alin’ny 26 Janoary ho avy izao hitarika ny fankalazana.
“Eo amin’ny Kianjaben’ny Mahamasina no hankalazaina ny fiarahamiasan’ny Fanjakana Malagasy sy ny Foiben’ny Fiangonana Katolika ao Vatikana, ny 29 Janoary 2017 ho avy izao. Ny Fanjakana Malagasy no mandray an-tànana ny arofenitra rehetra, indrindra ny lafiny fandaminana sy ny fandriam-pahalemana. Ny Sarambaben’ny kristianina dia amin’ny toerana tsotra no mipetraka, fa ny manampahefana eo anivon’ny Fanjakana sy ny Fivavahana ary ireo mpisorona sy relijiozy no eo amin’ny “Tribune centrale”. Ilaina ny mitondra elo sy satroka noho ny toetr’andro ho an’ireo rehetra tonga hamonjy ity lamesa fanehoam-pinoana ity”, hoy ny Vikera Jeneralin’ny Diosezin’Antananarivo, Mgr Ludovic Rabenantoandro. Ny Sekreteram-panjakana misahana amin’ny fifandraisana ara-politika amin’ireo firenena ivelan’ny Vatikana,ny Kardinaly Pietro Parolin no iraka manokan’ny Papa Fransoa eto Madagasikara amin’izao jobilin’ny fifandraisan’ny Fanjakana roa tonta izao.
Efa tomombana avokoa ireo pitsopitson’ny fandraisana ity manamboninahitra avy amin’ny Renivohitry ny Finoana katolika ity, na eo anivon’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny Malagasy sy ny Solotenan’ny Papa ray masina eto Madagasikara, na ny fanomanana ny litorjian’ny Jobily. Isaky ny Sabotsy tolakandro mantsy no mamerin-kira eny amin’ny Falda Antanimena ireo antokom-pihiran’ny arsidiosezin’Antananarivo. Marihina moa fa efa hatramin’ny nanateran’ny Nonce Apostolique, Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri tamin’ny fomba fifanajana ny taratasy manendry azy ho Solotenan’ny Fiketrahana Masina eto amin’ny Nosy, ny 19 Septambra tamin’ny 2015, no efa nandeha izao tsirin-kevitra fankalazana ny fiaraha-miasa izao. Raha iverenana ny tantara dia nanomboka ny datin’ny 19 Septambre 1966, no nanomboka ny fifandraisana ara-diplaomatika teo amin’ny Fanjakana roa tonta, fa ny 9 sy 10 Janoary kosa izany no navoaka tamin’ny fomba ofisialy tany Roma sy teto amin’ny tanin’ny Repoblikan’ny Madagasikara.
Maro ny mpisitraka amin’ny Katolika
Raha ny fanambaran’ny Solotenan’ny Fiketrahana Masina izay monina sy miasa eto Madagasikara dia matotra ny fifandraisana misy eo amin’ny fitondrana roa tonta hatramin’izay ka hatramin’izao. Maro ny Malagasy no misitraka tombotsoa amin’ity Fiangonana katolika ity. Anisan’ny mandray anjara goavana amin’ny fampivelarana maha-olona ny fiangonana katolika eto Madagasikara, ankoatra ny fanabeazana ny ara-pinoana sy ny ara-panahy dia miantsehatra amin’ny fanabezana ara-tsaina ny fiangonana izay hita taratra amin’ireo sekoly katolika manerana ny Nosy izany. Tsy latsadanja ihany koa ny fikolokoloana ny ara-batana : ankoatra ny fanatanjahan-tena dia eo ihany koa ny lafiny fitsaboana sy fanomezana sakafo ireo sahirana ara-pivelomana ary indrindra ny fampandrosoana ara-toekarena amin’ny fampiofanana sy fanaovana foto-drafitrasa maro toy ny toha-drano sy ny làlana.
Ankoatra ny Sorona Masina fankalazana ny fifandraisana ara-diplaomatika ho an’ny Vatikana sy ny Fanjakana Malagasy, dia ho raisin’ireo tomponandraikitra ara-panjakana amin’ny fomba fifanajana eny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, ny alin’ny 26 Janoary ho avy izao, sy any amin’ireo Lapam-panjakana ity Praiminisitry ny Fanjakana Vatikana ity. Efa nihaona tamin’ity tanan-kavanan’ny Papa ray masina Fransoa ity ny Filoha amperin’asa ankehitriny Hery Rajaonarimampianina, raha nitarika ireo delegasionina Malagasy nitsidika tany Vatikana ny volana Jona 2014. Anisan’ny andrandrain’ny mpino katolika Malagasy ny fanendrena kardinaly vaovao amin’izao fankalazana ny taon-jaobily izao.
Ny dian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tany Vatikana, nihaona tamin’ny Papa Fransoa ny taona 2014